'के सारो हाउ !' यो पूर्वतिरको जनजीवनमा प्राय बोलिने वाक्य हो । यसलाई कतिपयले थेगोको रूपमा पनि प्रयोग गर्छन् । पूर्वमा पनि अझ धरानका मानिसहरूको जनजिब्रोमा सजिलै झुण्डिने वाक्य हो यो । आफूलाई कुनै कुरा चित्र बुझेको छैन भने वा अलिक बढी नै लागेको छ वा नकारात्मक भावना पोख्नु पर्यो भने अलिक स्ट्रेस दिएर यो वाक्य बोलिन्छ - 'के सारो हाउ...।'
'के सारो हाउ... फोनसोन पनि छैन । 'के सारो हाउ...˜ माया मारेको ।'
मलाई भन्न मन लाग्छ 'हो साथी जीवन सारो नै रहेछ । ओखर भन्दा पनि सारो । पीडाको धनले जति हाने पनि नफोडि्ने, बरु कहिले उछि्टिएर धरान् इटहरी आइपुग्दो रहेछ फेरि कहिले उता काठमाडौँ बजारिदो रहेछ । तर कहिले फुट्न सक्दोरहेनछ । जहिले पनि सारोको सारै । शंकर लामिछानेले जीवनलाई कोमल प्याजको पत्रैपत्रमा तुलना गरेर गए । कसैले जीवनलाई केमा तुलना गरे, कसैले के मा । तर म त जीवनलाई ओखरझैँ कडा देख्छु । यो कडा जीवनले व्यवधान, हण्डर, पीडा सहँदा सहँदा पनि जस्ताको तस्तै छ । मेरो जीवनले यस्तै कडा चीज चपाइरहेको हुन्छ । कडा चीजले चपाइएको बस्तु पनि त स्वादिलै हुन्छ नि नरम चीजले चपाएर निलेको भन्दा होइन र साथी - हो साथी यही कडा जीवनले सारा विसँगति, विकृति, असत्यलाई स्वादिष्ट भोजनको रूपमा लिएर त्यसलाई पाचन र निर्मलीकरण गरेर अरुको जीवन लागि पौष्टिक तत्व सेचन गराउन तल्लीन छु म । त्यसैले म यही सारो जीवन मन पराउँछु । म यही सारो जीवनलाई कहिले नफुट्ने र नटुट्ने बनाउन चाहन्छु । तथापि कसैले कुनै बज्रले पनि मलाई टुटाउन सकून, फुटाउन नसकून ।
मेरो जीवन मात्र होइन साथी, हामी सबै नेपालीको जीवन सारो भएको छ - नरिवलको दाना बाँदरको हातमाझै । हामी नेपालीको जीवन जति नै बन्द , हडताल, लोडसेडिङ्ग, जाम र महङ्गीको मारले हाने पनि नफुट्ने अनि हाम्रो नियत्तिचाहिँ बाँदरको हातमा नरिवलझै बनेको छ । ऊ नेपालीको भाग्य फुटाउन खोज्छ तर सक्दैन । बरु नेपालीको भाग्य उछिटिएर कहिले मरुभूमिको तातो हावा खान पुग्छ त कहिले युरोप अमेरिकाको चिसोमा कठङ्याग्रिन पुग्छ अनि कहिले मुम्बईको कोठीमा पुग्छ । कहिलेकाही म अनलाइनको च्याटमा बसेको हुन्छु अनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूसँग कुरा गरेको हुन्छु । जब हजारौ नेपालीहरू आफनो देशलाई माया मारेर विदेशमा कामका लागि भौतारिएको थाहा पाउँछु अनि मेरो मन अत्यन्त मर्माहत बन्न पुग्छ । देश, गाउँ, इष्टमित्र छोडेर विरानो देशमा अति हण्डर खाएर बाँच्नुपरेको नेपालीको भाग्य देखेर म अनायासै भन्न पुग्छु- 'के सारो हाउ.. नेपालीको भाग्य ।' त्यस्तै कहिले घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक गएका नेपाली नारीहरूको आर्तनाद सुन्दा मेरो मन सयौ मनको भारीले थिचेजस्तो हुन्छ । त्यस्तै कहिले आफनो गाउँठाउँ, आफन्त र मायालुलाई छोडेर विदेशमा मायालुको सम्झनाले तडपिएको आत्मा पढ्न पुग्छु अनि अनायासै मेरो मुखबाट निस्कन्छ - 'के सारो हाउ...। '
नेपालीको भाग्य किन यति सारो भयो म मनन गर्न पुग्छु । वास्तवमा नेपालीको भाग्य कसरी यति सारो भयो - यसको पनि कुनै ऐतिहासिक कथा हुनु पर्छ । किनभने नेपालीको सबै कुरा सारो छ सारो नभई केही हुनेवाला छैन । त्यसपछि म वैचारिक धर्मशास्त्र पल्टाउन पुगेँ म ।
त्यहाँ मैले एउटा यस्तो ऐतिहासिक कथा पाए जुन यसप्रकारको छ - धेरै समय अघिको कुरो हो । त्यस बेलाको कुरो हो । भगवान महादेव र पार्वती घुम्न भनेर युरोप र अमेरिका पुग्नुभएछ । त्यहाको विकसित समाज देखेर छक्क पर्नु भएछ । प्रसन्न भएर त्यहाका मानिसलाई के वर माग्छौ माग भन्नुभएछ । अनि उनीहरूले भनेछन् - 'प्रभु हामीहरूसँग सबै कुरा भयो तर काम गर्ने कामदार भएनन् । हामीले अह्राउने खटाउने मान्छे पाएनौ । त्यसपछि महादेव भगवानले भन्नुभएछ तिमीहरूको इच्छा पूरा हुनेछ । यति भनेर महादेव पार्वती र्फकनुभएछ । त्यसपछि महादेव भगवान त्यस्तो मानिस कहाँ सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर देश विदेश घुम्न थाल्नु भएछ । तर कतै उपर्युक्त ठाउ नभेटेपछि नेपाल आइपुग्नु भएछ । पक्कै पनि यो देशमा कामदार मानिस सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसपश्चात उहाँले बुद्धि खियाउनु भएछ । उहाँले उही 'सारो' शब्द क्षेप्यास्त्रको रूपमा सिर्जना गर्नु भएर नेपालमा प्रक्षेपण गर्नुभएछ । अब नेपालमा सबैकुरा सारो हुँदै गयो । र्सवप्रथम त्यो 'सारो' शब्दको विष्फोटबाट निस्किएको विकिरणले नेपालको भूगोल र हावापानीमा असर पारेछ । उत्तरतिर पहाडैपहाड बनाउनु भएछ अनि दक्षिणतिर सम्मैसम्म । पहाड पनि अन्त कतै नभएको 'के सारो पहाड र हिमाल ' भनेझै बनेछन् । त्यसपश्चात 'सारो' शब्दले हावापानीलाई असर पारेछ । हावापानीमा ऋतु परिवर्तन हुदा उही सारो शब्द नभई अर्को ऋतु परिवर्तन नै नहुने भएछ । कसरी भने चिसो ऋतुमा चिसो वतासमात्र नभई शीतलहर र कठ्याङग्रिने चिसोले भुतुक्कै पार्दछ । अनि हामी भन्न पुग्छौ 'के सारो चिसो ' । यो सारो नभइ अर्को ऋतु परिवर्तन हुने कुनै छाट नै देखिदैन । त्यस्तै वसन्तमा हावा र हुरीले उग्र रुप लिन्छ । चारैतिर हुण्डरीले ताण्डव नुत्य लिन्छ । धेरै ठाउँ आगलागि हुन्छ र सुख्खाले चारैतिर सन्त्रास फैलाउँछ अनि मात्र अर्को ऋतु बदलिन्छ । त्यस्तै गर्मीको प्रचण्ड रापले हायलकामल पार्दछ । अनि हामी भन्न पुग्छौ 'के सारो गर्मी, ' त्यस्तै ग्रीष्ममा वर्षाले चारैतिर सम्राज्य फैलाउँछ । यति मात्र होइन बाढी पहिरो र डुबानले उग्ररूप लिएपछि हामी भन्न पुग्छौ 'के सारो पानी.. ,' यसरी र्सवप्रथम सारो शब्दले हावापानीमा आक्रमण गयो त्यसपश्चात नेपालको राजनीतिमा यसले हस्तक्षेप गर्‍यो । त्यो 'सारो' शब्दको क्षेपास्त्र भगवानले सिहदवारमा हान्नु भएछ राष्ट्रलाई सचालन गर्ने सिहदरवारमा त्यो शब्दको प्रभाव नेताहरूमा पर्न गएछ त्यस पछि सबै कुरा सारो हुँदै गएछ । त्यस समयसम्म नेपालमा राणा शासन सुरु भइसकेको थियो । राणा शासकले आफनो शासनकाल यति निरंकुस बनाए कि उनीहरूले नेपालीको जीवन ढुंगा जस्तो कडा र स्थिर बनाए । राणा शासनको अत्याचार नापी नसक्नुको भयो । अनि नेपालीहरू 'के सारो हाउ...।' भन्दै आन्दोलित बन्न पुगे । उनीहरू सारो फुटाउन एकजुट भए । । उनीहरूले त्यो विकिरणयुक्त , सारो फुटाए । अनि पञ्चायती व्यवस्थालाई ल्याए । पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि सिहदरवार छिरेपछि उही सारोले आक्रमण गरी हाल्यो । पुन पञ्चायती व्यवस्था फेरि सारो बन्न पुग्यो । यसले नेपाली हक अधिकार बाधिदियो । तानाशाही प्रवृत्तिमा देश चल्न थाल्यो । भष्ट्रचार र कमिशनखोरले देशलाई थाङ्थिलो पारे । फेरि नेपालीहरू 'के सारो हाउ..' भन्दै एक जुट हुन थाले । सारो फुटाउन नेपाली जनताहरूले कसैले हतियार उठाए, कसैले कलम उठाए, कसैले औजार उठाए । केही नहुनेले आवाज उठाए । अनि बहुदल व्यवस्था ल्याए । पुन: सारो लाई पन्छाएर केही नरम बन्न थाले नेपाली जनता । तर त्यो नरम फलामझैँ तातिदा नरम हुने मात्र थियो । बहुदलीय व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई फलामझैँ सारो बनाइदिए । तातिने जति नरम हुन्थे अनि जता मोडेयो उतै मोडिन्थे | नतातिनेहरूको जीवन फलामझैँ कडा बन्यो । सिहदरवार छिरेको बहुदल व्यवस्थालाई पनि सारोले आक्रमण गरिहाल्यो ।
राजनैतिक अस्थिरता, जनयुद्धको मारले नेपाली जनताको जीवन फेरिकडा बन्यो । धेरै जनताको रगत होली बनेर बग्यो । अब फेरि के सारो भन्दै जनता जुर्मुराए शान्तिको लागि । नेपाली जनताको भाग्यभन्दा धेरै टाढा थियो, शान्ति , सुव्यवस्था र सुख । अब धेरै नेपालीहरू युरोप अमेरिका र धेरै जसो अरब गइसकेका थिए । अझ जाने क्रम छ । अहिले नेपालीको जीवनको प्रत्येक पलपल उही 'सारो' ले आक्रमण गरिरहेको छ ।
'के सारो अशान्ति...।,'
आज प्रत्येक नेपालीको मानसिकतामा विदेशमा कामदार भएर बाँच्ने सोचाइ प्रत्येक दिन उम्रिरहेको छ ।
Dr.Govinda Bahadur Thapa
Sharmilaji, went through your story. It has been written being highly sensitive towards the painful plight of the Nepali people. It is quite impressive. However, it has some weaknesses also.  Please take it positively and think about what I write. First, You have said \_"Desh ko maya marera gayeka chhan\_" Is it vorrect to say ? Have they gone out of Nepal forgetting the country ? They have gone out temporarily and have not been dettached with the country. Second, You have said \_"Nepaliko vagya\_". I think Vagya is not proper word to use for the people of any country. Third, You have said it rains, flood comes in Grisma ritu, rain and flood comes in Barsha ritu, Baisakh and Jetha constitute the Grisma ritu. The feature of Grisma ritu is heat and dry. Please do not take it otherwise.
Di Jyu Namaskaar,<br /> Ke Saro yatharthaparak ani ramro gari katha bunnu vayeko haau? <br /> Naya barsa le hamro desh ma santi ra subyabastha lyauna sahayog pugos yahi kamana garau. Jaye hos hami ra hamro desh ko. SUVAKAMANA NAYA BARSA KO SABAI LAAI.